Maqaalka Brian Hoffman Martech Zone |
Maqaallada by Brian Hoffman
Brian waa isku duwaha suuq ee Macluumaadka Dilaaga, Bilaabis ku saleysan Seattle oo ku takhasusay naqshadeynta sawirada, sawirada dhaqdhaqaaqa, iyo sawirada isdhexgalka. Killer Infographics waxay ku faantaa soo jiidashada tayada sare ee awood u leh inay soo gudbiso nuqul dhammaystiran, nooc hal nooc ah oo xog ah, sawir qaas ah, iyo dhiirrigelin istiraatiiji ah. Brian wuxuu ku koray buuraha Pennsylvania iyo Vermont, hadana maalin walba wuxuu qaataa baraf baraf iyo socod lug ah buuraha Pacific Northwest.
Isniin, Janaayo 27, 2014 Axad, Janaayo 26, 2014 Brian Hoffman
Bilowga sanadka cusub had iyo jeer wuxuu la yimaadaa qorshooyin suuq geyn cusub, miisaaniyado iyo reyn-reyn soo noolaatay oo ku saabsan fursadaha sugaya ganacsi kasta. Haddii aad mas'uul ka tahay suuqgeynta shirkaddaada, suurtagalnimada ayaa dhab ahaantii noqon karta mid aad u badan. Nasiib wanaag, waxaan haynaa talo soo jeedinno kaa caawinaya inaad kobciso sumcaddaada iyo khadka tooska ah ee soo socda sannadka 2014. Halkan waxaa ah 5 qaraarro suuqgeyn online ah oo la doonayo in maanta la qaato: 1. Amp Up Your Content Marketing See for 2014 to